WONDERFUL UNIVERSE: ကော်ဖီတစ်ခွက်၊ နံနက်ခင်း တစ်ခု
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ နံနက်ခင်းများကို ဖြတ်သန်းကြရသည်။မျက်စိနှစ်လုံးဖွင့်လိုက်သည်နှင့် ကျနော်တို့ အသက်ရှူခွင့် ရနေသေးမှန်း ကျေနပ် ၀မ်းမြောက် မိဖို့ထက် အလုပ်မှီဖို့၊ ကျောင်းမှီဖို့ ပြေးလွှားနေရသော နံနက်ခင်းတွေ ဘယ်လောက် နွမ်းနယ်နေခဲ့ပြီလဲ။ တက်ကြွနေခဲ့ပြီလဲ။တနင်္လာနေ့ နံနက်ခင်းသည် အခါများစွာကလို မောပန်းတကြီး မဖြစ်တော့တာ ကြာပြီ။ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို အေးအေးလူလူ သောက်ရင်း လမ်းမပေါ်မှ လူတွေကို ထိုင်ငေးနေတတ်သော အကျင့်တို့က ကော်ဖီတစ်ခွက် စွဲသလို စွဲ နေခဲ့တာလဲ တစ်နှစ်နီးပါး ကြာခဲ့ပြီ။လုံးဝန်းလှပပြီး သာမာန်ကော်ဖီခွက်ထက် တစ်ဆခွဲမျှ ကြီးသော ကော်ဖီခွက်လေးဆီမှ မစ်ကီမောက်စ်ကလေးက ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြနေတာ ကြည့်ရင်း နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြုံးလိုက်မိသည်။ ဒီကော်ဖီခွက်လေးနှင့် ကော်ဖီဖျော်သောက်မိတိုင်း စာလေး တစ်ပုဒ်ကို ကျွန်တော် အမြဲ အမှတ်ရမိသည်။ စာကို သေချာ မမှတ်မိတော့။ကျောင်းသားဟောင်းတွေ အုပ်စု ကျောင်းက ဆရာတစ်ယောက်အိမ်မှာ တွေ့ဆုံပွဲလေး တစ်ခုလုပ်ကြသည်။ အားလုံးက အလုပ်နှင့် စိတ်ဖိစီးမှုများ အကြောင်းကို ပြောဆိုနေကြ၏။ တွေ့ဆုံပွဲလေးမှာ ကော်ဖီနှင့် ဆရာလုပ်သူက ဧည့်ခံလေသည်။ ကျောင်းသားဟောင်းများက တန်ဖိုးကြီးပြီး လှပသော ကော်ဖီခွက်များ သူ့ထက်ငါ ရွေးယူကာ ကော်ဖီကို ထည့်သောက်ကြသည်။ အဖိုးနည်းပြီး မလှပသော ကော်ဖီခွက်တစ်ချို့သာ အရွေး မခံရပဲ ကျန်နေရစ်ခဲ့ကြသည်။"လှပပြီး တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ခွက်တွေသာ အရွေးခံရပြီး မလှပ၊ အဖိုးသိပ်မတန်တဲ့ ခွက်လေးတွေသာ ကျန်နေခဲ့ကြတာ သတိထားမိကြလား။ လူဆိုတာ ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံး ဆိုတာတွေ လိုချင်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါဟာ မင်းတို့ဘ၀ရဲ့ ပြဿနာနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု ဆိုတာတွေအတွက် အရင်းအမြစ်ပါပဲ။ ဈေးအကြီးဆုံး၊ အကောင်းဆုံး အလှဆုံး ခွက်တွေကိုပဲ ရချင်လိုချင်ပီး သူတပါး လက်ထဲက ခွက်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဥြ်ကည့်တတ်ကြတယ်။ ခွက်တွေအပေါ်မှာပဲ အာရုံတွေ ရောက်နေတော့ ကော်ဖီရဲ့ အရသာကို ခံစားဖို့ဆိုတာ နောက်တန်းမှာ ရောက်နေတတ်ကြတယ်။ဘ၀ဟာ ကော်ဖီ ဆိုပါစို့။ အလုပ်၊ ငွေကြေး၊ ရာထူးနဲ့ လူမှုဝန်းကျင်က ကော်ဖီခွက်တွေနဲ့ တူတယ်။ အဲတာတွေအားလုံးက ဘ၀ကို အရသာခံ ထည့်သောက် ကြည့်ဖို့ ပဲလေ။ ကော်ဖီရဲ့ အရသာထက် ကော်ဖီထည့်တဲ့ ခွက်အပေါ် အာရုံများသွားတဲ့ အချိန်ကျ ကော်ဖီရဲ့ အရသာကို ခံစားဖို့ အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးတတ်တယ်"ဒီစာပိုဒ်ကလေးက ကျွန်တော့ အလွတ်နီးပါး ရနေသော စာပိုဒ်ကလေး ဖြစ်သည်။ကျွန်တော်လဲ ကော်ဖီခွက်ထဲက ကော်ဖီ အရသာကို မြည်းစမ်းဖို့ထက် လှပသော ကော်ဖီခွက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ လုံးပန်းနေမိသော နံနက်ခင်းတွေ ဘယ်လောက် များနေခဲ့ပြီလဲ။မရေရာသေးသော အနာဂါတ်တွေကို ကော်ဖီနှင့်အတူ သောက်သုံး ပစ်လိုက်ရင်း တနင်္လာနေ့ နံနက်ခင်းကို စားသုံးမိနေဆဲ။ ရောင့်ရဲတတ်ခြင်းတွေက ကော်ဖီအရသာကို ပိုမို ခံစားရစေမည်လား။ ၀ိုးတ၀ါး တွေးနေမိရင်းက ကျွန်တော်သည် ကော်ဖီသောက်သုံးသူ မဟုတ်တော့ပဲ ကော်ဖီခွက်ကလေး ဖြစ်သွားပြန်၏။ကျွန်တော်သည် တန်ဖိုးမကြီးသော၊ မလှပသော ကော်ဖီခွက်တစ်လုံးသာ ဖြစ်သည်။ ဘ၀ခရီးကို မလှမပ ဖြတ်သန်းခဲ့ရခြင်းများသည် ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို ပို..... ခါးသက်စေတတ်မှန်းလည်း သိတတ်နားလည်ခဲ့ပြီ။ မလှပသော အဖိုးမကြီးသော ကော်ဖီခွက်ကလေး သန့်စင်သပ်ရပ်နေဖို့သာ ကျွန်တော် တတ်နိုင်လိမ့်မည်။သို့သော်... တကယ်တမ်းတော့ ကော်ဖီခွက်ထဲမှ ကော်ဖီကို ကျွန်တော်ဆိုသည့် ခွက်ကလေးက ပိုမို ခါးသက်အောင်၊ ချိုမြိန်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အမှတ်မထင် သင်.... ဒီကော်ဖီခွက်လေးကို ရွေးချယ်မိပါက မိမိသောက်သုံးမည့် ကော်ဖီကို မိမိကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက် ဖျော်စပ်တတ်ရမည်သာဖြစ်၏။ ပရီးမီးယားကော်ဖီ ထည့်ဖျော်ပြီး စတားဘတ်ခ်မှ ကော်ဖီဖြစ်အောင် ကျွန်တော် ပြောင်းလဲပေးနိုင်မည်မဟုတ်။ ထို့အပြင် ကျွန်တော်ဆိုသည့် ကော်ဖီခွက်လေးအတွက်လည်း သင်...... ဂုဏ်တက်စရာ ဘာမျှ မရှိပါ။ သို့သော် သင်ဖျော်စပ်ထားသော ကော်ဖီအရသာလေးအတိုင်း သန့်ရှင်းစွာ ရှိနေနိုင်ခြင်း၊ ကော်ဖီကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း ဆိုသည့် တန်ဖိုးတစ်ခုတော့ ကော်ဖီခွက်လေးများ၏ တာဝန်အတိုင်း ကျေပြွန်စွာ ရှိနေနိုင်ပါလိမ့်မည်။ကျွန်တော်သည် အသက်ရှိသော ကော်ဖီခွက်တစ်ခွက်သာ ဖြစ်သောကြောင့် သင် သုံးလိုက တန်ဖိုးထားပါ။ သင် မသုံးလိုက မထိကိုင်မိစေရန် သတိပြုပါ။ ကျွန်တော်၏ ကော်ဖီခွက်ကလေး မစွန်းထင်းမညစ်ပေစေရန်ကတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်၏ တာဝန်သာ ဖြစ်သည်။ဖြူစင်စစ်မှန်သော ခင်မင်မှုများဖြင့်သာ မစ်ကီးမောက်စ် ရုပ်လေးလို ကျွန်တော်....... ထာဝရ သင်တို့ကို ပြုံးပြလျက် သင်တို့၏ င်္နနက်ခင်းများကို လှပနေစေချင်ပါသည်။:-)မေတ္တာဖြင့် မိုးကုတ်သားဒီစာလေးကို 20.07.2009 တနင်္လာနေ့ မနက်ခင်းမှာ ကော်ဖီတစ်ခွက် ထိုင်သောက်နေရင်း ထုံးစံအတိုင်း လမ်းမကြီးပေါ် ငေးနေမိရာက စိတ်ကူးရပြီး ရေးထားခဲ့ခြင်းပါ။ ဒီနှစ်ကုန်ရင်တော့ 2009 တစ်နှစ်လုံးလို တနင်္လာနေ့ ရုံးမတက်ပဲ နေလို့ မရတော့ပါဘူး။ 2010မှာ ထုံးစံအတိုင်း တစ်ပါတ် ငါးရက် ရုံးပြန်တက်ရတော့မှာမို့ 2009ခုနှစ်ရဲ့ ရုံးတက်ရက် နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ 24.12.2009 မှာ အမှတ်တရ တင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ နေ့တစ်ပိုင်းကနေစလို့ နောက်နှစ် ဇန်န၀ါရီလ သုံးရက်နေ့အထိ ရုံးပိတ်တော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ခရစ်စမတ်ဆုတောင်းလေး မိတ်ဆွေတို့ အားလုံးကို ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR TO YOU ALL....ကဒ်လေးအတွက် BERN ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းပါ။မိတ်ဆွေအားလုံးကို ချစ်ခင်လျက်မိုးကုတ်သား
Happy Xmas ဘာဖြစ်ဖြစ် ကော်ဖီခွက်လှလှတွေတွေကို စုတာဝါသနာပါသလို ကော်ဖီကိုလဲ အသေကြိုက်ပေါ့..ရွေးချယ်ထားတဲ့ ကော်ဖီခွက်လှလှလေးမှာ အရသာရှိတဲ့ ကော်ဖီပူပူ မွှေးမွေး ခါးခါးလေးတော့ ရှိစေချင် သောက်ချင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ချစ်ညီမျောက်မျောက်
ကော်ဖီကောင်းကောင်းကို ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ခွက်နဲ့ထည့်သောက်နိုင်ဖို့အဓိကကျသူသည်ကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်သည် ..ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်မှသာလျင်အရသာရှိပြီးပသာဒဖြစ်သော ကော်ဖီတစ်ခွက်နှင့်အချိန်တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပေလိမ့်မည်။
နောင့် ကတော့...ခွက်မရွေးဘူး...ဒါပေမယ့်...ခွက်လှလှလေး နဲ့ ကြီးကြီးလေး ရှိနေရင်တော့.. မလှမပ ခွက်သေးသေးလေးကို ယူမိမယ်မထင်ဘူး..ဟိဟိ..ဘာမှန်းမသိဘူး..ပြောကြည့်တာ..အဓိက က ကော်ဖီကောင်းပြီး ကိုယ်နှစ်သက်ဖို့ပါ...။း))
ကော်ဖီခွက်လှလှလေးနဲ့တော့ သောက်ချင်တာပဲ :Dမိုက်တယ် ရုံးပိတ်ရက်က မနာလိုဘူးးးးးးးးးးးးးးးးဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ကော်ဖီသောက်ပြီးရင် ရင်တလှပ်လှပ်ဖြစ်တတ်လို့ မသောက်ဖြစ်ခဲ့တာကြာလှပေါ့။ သို့ပေသည့် ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ တနလာင်္နေ့တွေကို နှုတ်ဆက်သွားတဲ့အကြောင်း ဖတ်ကောင်းပါသည်။ ပျော်ရွှင်သော ခရစ်စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ ကိုမိုးကုတ်သားနဲ့မောင်နှမတွေအားလုံးကို ဇွန်မိုးစက်မှ ထပ်တူဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ :)
လှပတဲ့ ကော်ဖီခွက်လေးနဲ့အတူ အေးမြတဲ့ ဆုတောင်းလေးကို ဖတ်ရင်း .....Marry Christmas & Happy New Year!!!ပြန်ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ် ကိုမိုးကုတ်ရေ....ခင်မင်လေးစားလျှက်
I had ever read that story in English... Nice & precious thoughts! Merry X'mas & Happy new year.
ကုတ်ကုတ်ရေ... :Dတို့ကတော့ ဒန်ခွက်နဲ့လည်း သောက်မှာပဲ :-Pအယ့်.... အထဲက ကော်ဖီလေးကတော့ cream များများလေးနဲ့ စိမ့်ခါးလေးမှ...အတွေးလေး အရမ်းလန်းတာပဲ..တော်လိုက်တာ...ချစ်ခင်မှုများစွာဖြင့်...
ကော်ဖီသောက်ဖို့ ခွက်ကြည့်ရင်းနဲ့ ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ကူးက ကောင်းတယ်။ ကော်ဖီခွက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို ဖော်ပြသွားတာလေး ကြိုက်တယ်။ မငုံတော့ ဘာခွက်နဲ့သောက်သောက် ခေါင်းတအားရှုပ်လာရင် ကော်ဖီပူပူလေး တစ်ခွက်လောက်တော့ သောက်လိုက်ရရင် ကျေနပ်တယ်။
ကော်ဖီဆိုလျှင် ခွက်ကြီးမှ ကြိုက်တတ်သော အကျင့်တူနေသည်။ :))
အတွေးရော အရေးရော မိုက်လိုက်တာ။ မိုးအေးအေး။ ကော်ဖီတစ်ခွက် ။ စာတစ်အုပ်နဲ့ ။
ဒီ Post ကတော့ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်လို့ ဝင်ရေးလိုက်တယ် ကိုဘို။ကိုယ်ကတော့ Coffee ကိုလဲရူးသွပ်သူ...Coffee Cup တွေကိုလဲရူးသွပ်သူပေါ့။Coffee Cup လှလှနဲ့သောက်ရမှ ပြည့်စုံတယ်လို့လဲ ထင်မိသေးတာ (ပိုတာပေါ့လေ)။နောက်ပြီး Coffee ရဲ့အရသာကိုလဲ အဲလိုမှ ပိုခံစားမိတာ။ နောက်ပြီး ရန်ကုန်မှာတုန်းကဆိုလဲ ခွက်လှလှနဲ့ ဆိုင်တွေဆို အမှတ်တရ ဖြစ်မိတတ်တယ်လေ။ဘာလို့မှန်းမသိဘူး ကိုယ်ကတော့ခွက်ရော Coffee ရောကောင်းစေချင်တာပါ (လောဘကြီးတာပေါ့လေ)။ဒီမှာလဲ လက်ဖက်ရည် သောက်ရင် အဲဒီတစ်နေရာမှာပဲသွားသောက်ဖြစ်တယ်....လက်ဖက်ရည် ရော ခွက်ရော နှစ်သက်လို့လေ ....အခန်းဖော်အမ ကို တောင်ပြောမိတယ်...ကိုယ့်လိုအရူးတွေရှိလို့ အဲ့လိုခွက်တွေ ရောင်းကောင်းနေတာလို့ :)အော်...Comment နဲ့ Post နဲ့ လွဲနေပြီထင်ပ။ဒီ Post ရဲ့အရေးအသားက အရမ်းတည်ငြိမ်ပြီး ရိုးရှင်းတယ်....
အကြီးအကျယ်အော်သွားပါသည်။အမည်မဖော်လို သူ ဦးသီဟသစ်ဗီလိန်ဖိုးသင်္ကြန်ငချမ်းကောင်တလနွန်ရေတမာတောင်ပေါ်သား(မစ်စ် အက်စ်ဂျီ)မျိုးထက်ဇော်သံလွင်ဟီးရိုးမိုးကုတ်သားရီနိုမာန်ဆောင်းချမ်းမိုးဖိုးစိန်(ဖဲဝိုင်းမှ ထအော်ကြသည်)Happy new year playing card game!!!!!